पहिलो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकको नाफा २२% घट्यो
कात्तिक ३०, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकको खुद नाफा २२ प्रतिशत घटेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले रू. ४६ करोड १४ लाख खुद नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२ दशमलव ९६ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेसँगै खुद नाफा घटेको हो । पहिलो त्रैमासमा कम्पनीेले रू. १ अर्ब ३६ करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ३० करोड कम हो । गत वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले रू. १ अर्ब ६६ करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।
पहिलो त्रैमासमा बैंकको सञ्चालन आम्दानी भने बढेको छ । यस अवधिमा अन्य सञ्चालन आम्दानी रू. ६ करोड ९८ लाखबाट बढेर २२ करोड १८ लाख पुगेको छ । कम्पनीले रू. ६१ करोड १८ लाख सञ्चालन नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा यो नाफा ८२ करोड ८० लाख थियो ।
पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको खराब कर्जा भने घटेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ३ दशमलव ७० प्रतिशतबाट घटेर २ दशमलव ३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
हाल १४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. ११ अर्ब १६ करोड छ । उक्त विवरण अनुसार हाल बैंकको पूँजीकोष अनुपात २० दशमव ३३ प्रतिशत रहेको छ भने कोषको लागत ७ दशमलव ३४ प्रतिशत, आधार दर ८ दशमलव ५३ प्रतिशत, सिसिडि रेशियो ७२ दशमव ४७ प्रतिशत र स्प्रेड दर ४ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ ।
नाफा घटेसँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २१ दशमलव ६६ बाट घटेर १५ दशमलव ९० मा झरेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २४४ दशमलव ९१ र मूल्य आम्दानी अनुपात २७ दशमलव ७ गुणा रहेको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीको निक्षेप संकलन रू. १ खर्ब ४३ अर्ब ६३ करोडबाट घटेर रू. १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोडमा झरेको छ भने कर्जा लगानी रू. १ खर्ब २१ अर्ब ९४ करोडबाट बढेर रू. १ खर्ब २३ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ ।